Cabo Verde Airlines dia mandefa ny sidina Sal-Porto Alegre, Brezila
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cabo Verde Airlines dia mandefa ny sidina Sal-Porto Alegre, Brezila
Seranam-piaramanidina Cabo Verde nandefa sidina mahazatra eo anelanelan'ny Sal, Cabo Verde ary Porto Alegre, Brezila.
Ny sidina voalohany teo anelanelan'ny Porto Alegre sy Sal dia natao ny alakamisy 12 desambra lasa teo, niainga avy tao amin'ny seranam-piaramanidina Salgado Filho tamin'ny 08.55 hariva, ora teo an-toerana, ary tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampon'i Amílcar Cabral tamin'ny 07.55 maraina, ora teo an-toerana.
Talohan'ny nialàny dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'io lalam-baovao io i Mário Chaves, CEO lefitra sady Lehiben'ny tompon'andraikitra misahana ny raharaha eo amin'ny orinasa Cabo Verde Airlines.
“Porto Alegre dia tanàna feno tantara ary iray amin'ireo lehibe indrindra eto Brezila. Miaraka amin'i Fortaleza, Recife, ary Salvador, dia manidina amin'ny tanàna efatra amin'ny Top 10 amin'ny tanàna Breziliana lehibe indrindra izahay. Ny fifandraisana misy eo amin'i Cabo Verde sy Brezila dia miverina amin'ny laoniny ary tianay ny hanohy hanamafy ireo fifandraisana ireo amin'ny làlana stratejika hafa », hoy izy.
Ny làlana dia manomboka amin'ny fifandraisana roa isan-kerinandro, ny alarobia sy zoma eo anelanelan'ny Sal Island sy Porto Alegre ary ny Alakamisy sy sabotsy eo anelanelan'ny Porto Alegre sy Sal. Manomboka amin'ny 23 desambra dia hisy fifandraisana fahatelo, miala ao Sal ny alatsinainy ary hiala ao Porto Alegre ny talata.
Ny sidina rehetra dia hifandray amin'ny foibe iraisampirenena Cabo Verde Airlines any Sal, ary any izy io dia afaka mifandray amin'ny toeran'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Cabo Verde, Senegal (Dakar), Nizeria (Lagos), Eropa (Lisbon, Paris, Milan ary Roma) , Washington DC ary Boston.
Ho fanampin'ny fifandraisana hub ao amin'ny Sal Island, ny programa Stabover an'ny Cabo Verde Airlines dia mamela ny mpandeha hijanona mandritra ny 7 andro ao Cabo Verde ary hikaroka ireo traikefa samihafa any amin'ny nosikely tsy misy sarany fanampiny amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina.
Ity zotra vaovao manelanelana an'i Porto Alegre sy Sal ity dia mikasa ny hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'i Brezila sy Cabo Verde, ao anatin'ny paikadin'ny orinasa ho an'ny tsena amerikana atsimo. Any Brezila, ankoatry ny Porto Alegre, ny Cabo Verde Airlines dia manidina ihany koa mankany Fortaleza, Recife, ary Salvador.
United Airlines dia manampy serivisy vaovao avy any Denver mankany The Bahamas amin'ny 2020
Dubai Tourism dia mandefa takelaka kaody QR ho an'ny mpitsidika amin'ny toerana malaza 54